Igumbi elincinci labucala kwindlu yelizwe
Yiza uzonwabele uxolo lwasemaphandleni. Embindini wezidiliya zaseTursan, ukuphosa ilitye ukusuka kwindlela eya eSaint-Jacques-de-Compostelle kunye neebhafu ezishushu ze-Eugènie-les-Bains. Ndikunika igumbi igumbi labucala kwindlu yethu enkulu yelizwe.
Ndikunika igumbi labucala kumgangatho wokuqala wendlu yelizwe lethu. Kumgangatho ophantsi kukho igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi ongayisebenzisa ngovuyo.
Igumbi lincinci kodwa lipholile, likhanya kakhulu kuba lijonge emazantsi. Apho uya kufumana ibhedi enye.
Sinamagumbi amaninzi, ukuba niza niliqela, kuya kufuneka nibhukishe amagumbi ngokwahlukeneyo. Okanye ndithumele umyalezo kwaye siza kubona oko kusebenza kakuhle kuwe.
4km ukusuka indlu kwilali Geaune, apho kukho zonke iivenkile zasekuhlaleni (iposi, evenkileni ivenkile, yokubhaka, ekhemesti, ivenkile icuba, iindawo zokutyela, kunye nabathengisi bade yesibini-ngesandla kubazingeli nithengisa enongwe ...) Kuyinto eliphilileyo kwilali apho kukho imisitho eqhelekileyo (imarike yamafama, ukuthengiswa kwegaraji, iikonsathi, neminye iminyhadala yasekuhlaleni).
Kananjalo umgama oziikhilomitha ezi-4 kuphela uya kufumana ilali entle yasePimbo. Le lali yimbali yokuma kwindlela eya eSantiago de Compostela, apho abahambi ngezonqulo baye badlula iinkulungwane. Uyakuxabisa i-rustic charm yale lali, icawa yayo edibeneyo, igadi yayo kunye nombono wayo we-panoramic wePyrenees.
Ilali enomtsalane yase-Eugénie-les-Bains ikude ngeekhilomitha ezilishumi. Siya apho ngenxa yonyango lwayo olushushu, iigadi zayo ezintle kunye nendawo yokutyela eneenkwenkwezi zaseMichelin. "Les Prés d'Eugénie", indawo yokutyela yompheki uMichel Guérard (iinkwenkwezi ezi-3 zeMichelin), iya kuba sisithuba esibalulekileyo kuzo zonke iigourmets kunye nabanye abathandi bokutya okulungileyo.
Ngexesha lokuhlala kwakho nathi, ndingavuya kakhulu ukuxoxa kunye nokwabelana nawe. Ndiyayithanda indalo, izilwanyana, ukuhamba kunye nokuba nexesha elimnandi. Kuluyolo ukuba ndiya kutshintshana nawe. Ndithetha isiJamani, isiFrentshi kunye nesiNgesi.
Sineekati ezimbini nedonki eziya kukuvuyela ukuwolwa. Idonki yethu uMelba uyayithanda inkampani, ngoko ke ukuba uza nabantwana ungalibazisi, uyabathanda. Banokuyiphulula, bayibrashe bade bayikhwele !!
Ukuba ujonge ngakumbi uxolo kunye nokuzola, ngokuqinisekileyo siya kuluhlonipha ukhetho lwakho kwaye sikuvumele ukuba urhoxe.
Ngexesha lokuhlala kwakho nathi, ndingavuya kakhulu ukuxoxa kunye nokwabelana nawe. Ndiyayithanda indalo, izilwanyana, ukuhamba kunye nokuba nexesha elimnandi. Kuluyolo ukuba ndiya…